အကောင်းဆုံးစျေးဝယ် Apps ကပ | အန်းဒရွိုက်သည်နောက်ဆုံးပေါ် APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » 15 ၏ Android အတွက် 2019 အကောင်းဆုံးစျေးဝယ် Apps ကပ
15 APK ကို၏ Android အတွက် 2019 အကောင်းဆုံးစျေးဝယ် Apps ကပ
သင်တစ်ဦးသည်လူသို့မဟုတ်သင့်အသက်ကဘာလဲဆိုတာတောင်မှအမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်ရှိမရှိဒါဟာအရေးမထားဘူး။ ဒါဟာငါတို့ရှိသမျှသည်စျေးဝယ်ကိုချစ်တဲ့လေ့လူသိများအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပွငျကြှနျုပျတို့အားလုံးမှအဘယ်ကြောင့်ဈေးဝယ်အယူခံသိပ်သိသာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ အပြင်ကကမ္ဘာလုံးအနှံ့အားလုံးမှလူသန်းပေါင်းများစွာများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု buster ဖြစ်ခြင်းကနေစျေးဝယ်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးတည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်ကျေးဇူးတော်တွေအများကြီးနဲ့အတူကမ္ဘာပေါ်မှာရွှေ့ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးစွမ်းသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သူကြိုက်နှစ်သက်မလာတာလဲ? မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ယခင်မျိုးဆက်စျေးဝယ်ဖို့အသုံးပြုနှင့်မည်သို့လက်ရှိမျိုးဆက်ဆိုင်လေ့ဘယ်လောက်အကြားဒီတစ်ခုအဓိကကွာခြားချက်ရှိပါတယ်။ ထို့ပြင်သောခြားနားချက်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်နေသောရုံနှစ်ခုစကားတွေနဲ့ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းစျေးဝယ်စာသားဘာမှနှင့်ကျနော်တို့ဖန်စီတတျနိုငျသအရာအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း options များ၏ထိုပင်လယ်သည်။ သင့်ရဲ့အောက်ခံမှဖိနပ်အဘို့အစျေးဝယ်ကနေ, သင်စာသားသင့်အိမ်၏စညျးစိမျခမျြးအတွင်းအွန်လိုင်းကအားလုံးလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပိုပြီးအဘယ်သို့ယခုအများအပြားလက်ဝတ်ရတနာစတိုးဆိုင်များလည်းသူတို့မဝယ်ချင်သောအိမ်မှာသူတို့ရဲ့လက်ဝတ်ရတနာကြိုးစားပြီးတော့တကောက်ဖို့ option နဲ့အတူဖောက်သည်ပေးဖြစ်ကြောင်းပါ! နောက်ထပ်အဲဒီစျေးဝယ်ရွေးချယ်စရာအားလုံးရယူသုံးရုံ application တစ်ခုဒေါင်းလုဒ်အနည်းငယ်ကလစ်လုပ်နေဖြင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
သို့သော်သင် 2019 ၌သင်တို့၏ android ဖုန်းပေါ်မှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်သောအကောင်းဆုံးစျေးဝယ် apps များအဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူးဆိုရငျကော ငါတို့သည်သင်တို့၏နောက်ကျောတယ်ခဲ့ကြပြီးအခု 15 ၏ android များအတွက် 2019 အကောင်းဆုံးစျေးဝယ် apps များတစ်ခုတစျခုလုံးကိုစာရင်းနှင့်တကွသင်ပေးမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကောင်းပြီ, မစိတ်မပူပါနဲ့။
15 ၏ Android အတွက် 2019 အကောင်းဆုံးစျေးဝယ် Apps ကပအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ဘို့ကျောက်အောက်မှာနေထိုင်နေကြပြီမဟုတ်လျှင်သင်သည်အမေဇုံ၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီမဟုတ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမရှေးခယျြမှုလည်းမရှိ။ လောလောဆယ်အမေဇုံရုံအိန္ဒိယနာမည်ကျော်စျေးဝယ် applications များတဦးဖြစ်ခြင်း၏အနေအထားကိုင်ထားပါဘူးဒါပေမယ့်လည်းအားလုံးကမ္ဘာအနှံ့ကနေအများဆုံးလူကြိုက်များသောအသုံးပြုသောစျေးဝယ် applications များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ အမေဇုံစျေးဝယ်လျှောက်လွှာ သုံးစွဲဖို့မယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူသည်နှင့်အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှအမျိုးအစားအတွက်ရွေးချယ်စရာစာသားထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့အတူအသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတစ်ခုလွယ်ကူသော interface ကိုရှိပါတယ်။ သငျသညျအမေဇုံအပေါ်တစ်ခုခုရှာတွေ့ဘူးလျှင်သင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေအခြားမည်သည့်စျေးဝယ်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှာတွေ့သွားကြသည်မဟုတ်ကြောင်းတော်တော်လေးကောင်းသောအခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းရှိပါတယ်။
အမေဇုံ၏စျေးဝယ်လျှောက်လွှာကိုလည်းငွေပေးချေမှုပိုက်ဆံအိတ်အဖြစ်အသုံးပြုခံရကြောင့်တစ်ဦးမျှသာ 23 MB အထိ၎င်း၏အသေးစားအရွယ်အစားလျင်မြန်စွာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဤသည်စျေးဝယ် application ကို App Store မှာ 4.3 ထဲက5ကြယ်တစ်ဦးအထင်ကြီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီးလက်ရှိတွင် 17 ကျော်မှတဆင့် browse မှအသုံးပြုသူများအတွက်ထုတ်ကုန်ကုဋေခဲ့သည်!
Flipkart ကြောင့်လူကြိုက်များနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူမှကြွလာသောအခါအမေဇုံမှနှိုင်းယှဉ်သာနည်းနည်းကင်းမဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယစျေးဝယ်မိုဘိုင်း application ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အများအပြားအသုံးပြုသူများအမေဇုံဤမိုဘိုင်း application ကိုသုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်မပြောဘူး။ ထို့အပြင်, ဒီဒီလျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိသည့် 4.5 ထဲက5ကြယ်များကို App Store မှာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့်အတော်လေးသိသာသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အတွင်းမှာတော့, များစွာသောဆောင်းပါးများနှင့်ပုံပြင်များ Flipkart ကစတင်မျှသာအတွက်လက်ခံရရှိခဲ့သည်ရသောကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုအကြောင်းကိုအွန်လိုင်းထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအစမကြာခဏအိန္ဒိယတွင်အရေအတွက်ကတဦးတည်းဈေးဝယ်မိုဘိုင်း application အဖြစ်အမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာလက်ရှိ Walmart Flipkart ၏ 77% အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသတိပြုပါဖို့လည်းအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရက်စွဲစေအကြီးဆုံးက e-Commerce သဘောတူညီချက်ဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည်အများအပြားခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Flipkart ၏မိုဘိုင်း application ကိုမှရွေးချယ်ဖို့ထုတ်ကုန်များ၏ရွေးချယ်မှုများကုဋေတစ်တုန်လှုပ်စေသော 80 နှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့!
Myntra နည်းတူအများကြီးက၎င်း၏ရယ်စရာကြော်ငြာများအတွက်လူသိများသည်အဖြစ်က၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုလူသိများသောစျေးဝယ် application ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာကို Android နှင့် iOS အသုံးပြုသူများကနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်လူကြိုက်များသောအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ application ကိုသာ 14 MB အထိတစ်ဦးရဲ့အရွယ်အစားရှိပြီးအဖြစ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လွယ်ကူမြန်ဆန်သည်။
အဆိုပါ application ကိုလည်း App Store မှာပေါ် 4.3 ကြယ်တစ် rating ရှိပြီးအဓိကအားဖြင့်ဖိနပ်, အဝတ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ယောက်ျား, မိန်းမ, ကလေးတွေများအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောဖက်ရှင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဤလျှောက်လွှာအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်သောစျေးနှုန်းများ, အကြီးဖြစ်ကြပြီးသူတို့သည်လည်းကောင်းတစ်ဦးပြန်လာသည့်မူဝါဒရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုလည်းပစ္စည်းအများစုကောင်းမွန်သည်။
Ajio ကအွန်လိုင်းစျေးဝယ်မှကြွလာသောအခါအိန္ဒိယအသုံးပြုသူများအများ၏စိတ်တွင်ပေါ်လာသည့်အခြားအကြီးအမိုဘိုင်း application ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာကိုအဓိကအားအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံး၏ဖက်ရှင်လိုအပ်ချက်များကု သ. မရသော။
သငျသညျအစဉ်အလာအဝတ်အစားပစ္စည်းများဒါမှမဟုတ်ပိုမိုခေတ်မီပစ္စည်းပစ္စယအချို့ကိုတူသောဤလျှောက်လွှာထဲကနေအဝတျအစားပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရနိုင်သည်။ ဤလျှောက်လွှာကိုလည်းအများအပြားအသုံးပြုသူများသည်ဤလျှောက်လွှာကိုပျော်မွေ့မပြသသွားရာ 4.2 ထဲက5ကြယ်တစ်ဦးအထင်ကြီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။
ဒီ app လည်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်နှင့်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူ interfaces တဦးရှိပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာကိုအကောင်းဆုံး features တွေ၏အချို့သင်သည် Ajio ကနေအမိန့်အခါသင်တိုင်းတစ်ခုတည်းအချိန်ရသည့်စဉ်ဆက်မပြတ်အထူးလျှော့စျေးနှင့် 10% ဝင်ငွေရှိပါတယ်။
ဒီ application ကိုအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဟာ android application များအခမဲ့အဘို့, install ထားတဲ့မိုဘိုင်း application ကိုထိပ် 10 စာရင်းကိုအောက်မှာလာသတိပြုပါဖို့လည်းအတော်လေးပျော်စရာပါပဲ။
သငျသညျအစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့ဖက်ရှင်လူအများစုကနေပိုပြီးအနောက်တိုင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းသဘောပေါက်ရှိပါသလား? သင်နှင့်သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုက်ညီသည့်အဝတ်, အမျိုးအစားကိုရှာဖွေမကြာခဏနိုင်ခြင်းရှိပါသလား ဤမေးခွန်းများကိုမဆိုဖို့အဖြေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ရှိန် သင်တို့အဘို့အဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မိုဘိုင်း application ကို 4.7 ထဲက5ကြယ်တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီး၎င်း၏အရွယ်အစားသာ 26 MB အထိဖြစ်သကဲ့သို့လျင်မြန်စွာဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤလျှောက်လွှာကိုဖွင့်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ကျေနပ်မှုဖောက်သည်သန်းပေါင်းများစွာအနေဖြင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှိပါတယ်။ အသုံးပြုသူများသည်ဤလျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောလေ့ရသောအသုံးအများဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာ, ကနေရှေးခယျြဖို့စာသားမည်သူမဆိုအဘို့အဝတ်အစားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။
ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်း application ကိုအံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းရှိပြီး၎င်းတို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစာသားမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ သင်တစ်ဦးဖက်ရှင်စျေးဝယ် app ကိုမှ ပို. အဘယ်အရာကိုလိုခငျြနိုင်မလဲ?
အွန်လိုင်းအလှကုန်ဝယ်ယူနှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးစုံတွဲကာလအတွင်းယင်း၏လူကြိုက်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌စိုက်ပျိုးတော်မူကြောင်းကိုအရာဖွစျသညျ။ အများစုကျွမ်းကျင်သူများက Nykaa အဲဒါကိုအဘို့ကြီးစွာသောရွေ့လျားနေသောအင်အားသုံးခဲ့သကဲ့သို့များအတွက်ချီးမွမ်းဘွယ်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ဤလျှောက်လွှာကိုအရွယ်အစားသာ 12 ကို MB ဖြစ်ပါတယ် 4.6 ထဲက5ကြယ်တစ်ဦးက App Store ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။
များစွာသောအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအဘို့, ဤလျှောက်လွှာကိုကဆံပင်စောင့်ရှောက်မှု, အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့်မိတ်ကပ်နှင့်ပတ်သက်သောထုတ်ကုန်လာပြီမှကြွလာသောအခါသူတို့မှပေါ်ခုန်ပထမဦးဆုံး option တစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျဤလျှောက်လွှာအပေါ်အသားအရေ-တိကျတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုလည်းရနိုင်! သို့သော်ဒီ app ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာသည်၎င်း၏စစ်မှန်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့တရုတ်အတွက်အသုံးပြုသူများအကောင်းစွာဤလျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြပေမယ့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်, ဒီမိုဘိုင်း application ကိုအတန်ငယ်တစ်ဦးရောနှောတုံ့ပြန်မှုရှိပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာကို 4.7 ထဲက5ကြယ်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသော App Store မှာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်သင်ကပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များမှတဆင့် browse လျှင်သင်အိန္ဒိယအသုံးပြုသူများအတွက်ဤလျှောက်လွှာကိုတက်ဖြတ်တောက်လေ့ရသောကွဲပြားခြားနားသော '' ကိစ္စများ '' ရှိပါတယ်စောငျ့ရှောကျပါလိမ့်မယ်။
ဤလူမျိုးကိုဒီဝါသနာမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြောမဟုတ်ပါဘူး။ ဤလျှောက်လွှာကိုသငျသညျစာသားသင်ကပေါ်ချင်ဘာမှရနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်အမေဇုံမှအတန်ငယ်ဆင်တူသည်။ ဤလျှောက်လွှာကြောင်းကြီးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်အလားတူမိုဘိုင်း application များနှင့်အတူလာသောအခါကုမ္ပဏီများကသိသိသာသာကြီးမားသည်အရာ 65 MB အထိတစ်ဦးရဲ့အရွယ်အစားရှိပါတယ်။
သငျသညျဤလျှောက်လွှာကိုသုံးပြီးအပြီးရနိုင်နှင့်ထိုအားသာချက်အချို့ကြောင့်အကြီးအဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ထုတ်ကုန်များအမျိုးမျိုးကြီးမားကြောင်းဖြစ်သောများစွာသောအားသာချက်များလည်းရှိပါသည်။ တစ်အိပ်ရာထဲကနေအဝတ်သို့မဟုတ်အဝတ်လျှော်စက်တွေ, သင်စာသားကဒီမှာဘာမှရနိုင်။
သင်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သို့မဟုတ်ဒါစဉ်အတွင်းမည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာ application ကိုအတူထိတွေ့ပါပြီ အကယ်. သင်ကကလပ်စက်ရုံ၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီမဟုတ်ကြောင်းမျှအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ ဤသည်မိုဘိုင်း application ကို 2017-2018 ကာလအတွင်းတစ်ချိန်ချိန်မှာလူကြိုက်များမှထနှင့်၎င်း၏အံ့သြလောက်အောင်စျေးပေါစျေးနှုန်းများများအတွက်လူသိများသည်။
ဤလျှောက်လွှာကိုလည်း 4.1 ထဲက5ကြယ်တစ်ဦးအထင်ကြီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီး Download ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူကြောင်းဆိုလိုတာကအရွယ်အစားသာ 19 ကို MB ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အားလုံး rosy နှင့်ဤလျှောက်လွှာနှင့်အတူရှင်းပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ယင်း၏ daringly စျေးပေါစျေးနှုန်းများအဘို့ဤလျှောက်လွှာကိုခြီးမှမျးပါဒါပေမယ့်လည်းထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအစဉ်အမြဲမလျောက်ပတ်သည်ကိုပြောပါတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။
အချို့ရှိကိစ္စရပ်များအားဤလျှောက်လွှာများ၏ဖောက်သည်န်ဆောင်မှုဌာနကိုလူတို့နှင့်လည်းဖြစ်ကြပြီးသင်ကိုအပ်ခံရဖို့သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတချို့အချိန်ကြာပါတယ်။ ဤသည်ဤလျှောက်လွှာကိုမှသူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှုအပေါင်တဲ့သူဖောက်သည်များရှိနေကြသည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျိန်းသေတဲ့ကွိုးစားရကျိုးနပ်ပါ!
Bewakoof သင်သည်သင်၏ App Store မှအလွယ်တကူရနိုင်ကြောင်းအခြားအွန်လိုင်းစျေးဝယ်မိုဘိုင်း application ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာကို 4.6 ထဲက5ကြယ်တစ် rating ရှိပြီး၎င်း၏အရွယ်အစားသာ 6.3 ကို MB ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်ကိုဆိုလိုသည်။
ဤလျှောက်လွှာ၏ interface ကိုအကောင်းနှင့်အဓိကအားဖြင့်မိုဘိုင်းဖုံးများ, အမျိုးသမီးအဝတ်အစား, ယောက်ျားရဲ့အဝတ်အစားပစ္စည်းများကို၏အမျိုးအစားထဲမှာထုတ်ကုန်နှင့်အတူဆကျဆံ။ အတော်များများဖောက်သည်အွန်လိုင်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အံ့သြဖွယ်ထည်အရည်အသွေးနှင့်ဇာတ်ဆောင်ကို T-ရှပ်အင်္ကျီ၏ဤလျှောက်လွှာ၏ကြီးမားသောပန်ကာဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့သည်ဤအမှုအရာတို့ကိုဖြစ်စေမကြိုက်လျှင်ဒါဆိုဤလျှောက်လွှာကိုရယူပါ။
အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသား wear ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာအချို့ရှိကြောင်းအံ့သြဖွယ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ထိုအ Craftsvilla ကြောင်းကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်ရုံဘယ်လောက်စစ်မှန်တဲ့ထေူတထိုကဲ့သို့သောမိုဘိုင်း application ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာကိုအဓိကအားတိုင်းရင်းသား wear အတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအကွာအဝေးနှင့်အတူ၎င်း၏ဖောက်သည်ပေးသည်။
အဆိုပါ application ကို App Store မှာ4ထဲက5ကြယ်ကောင်းတစ်ဦးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်မျှသာ 9.2 MB အထိ၎င်း၏အရွယ်အစားလည်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ အပြင် sarees နှင့် salwar ဝတ်စုံကနေ, သင်လက်ဝတ်ရတနာ, ဆင်မြန်း, ဤအံ့သြဖွယ်မိုဘိုင်း application ကိုပေါ်လက်မှုပညာပစ္စည်းများလည်းရနိုင်တယ်။
တာတာဖွင့်ကြောင့်တတ်နိုင်သမျှမဆိုနှင့်တိုင်းကဏ္ဍတွင်ပူးပေါင်းလေ့သောကုမ္ပဏီများ, တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်, အွန်လိုင်းစျေးဝယ်အချို့နှစ်ပေါင်းနောက်ကျောထဲသို့ဝင်ရသောတဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ရှင်နဲ့အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကိုအဘို့အစျေးဝယ်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည် Tata CLiQ ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဒီ app ကို App Store မှာ 4.2 ထဲက5ကြယ်ကောင်းတစ်ဦးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီး 7.9 MB အထိတစ်ဒေါင်းလုပ်အရွယ်အစားရှိပါတယ်။ ဒါဟာမြန်ဆန်ကို download လုပ်ပါရန်လွယ်ကူနှစ်ဦးစလုံးသည်ကိုဆိုလိုသည်။ အပြင်ဒီကနေ, ဤလျှောက်လွှာကိုလွယ်ကူစွာအပြန်အလှန်ဒီဇိုင်းနှင့်လျှပ်စီး-အစာရှောင်ခြင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၏အရာ၌ဝါကြွားနိုင်ပါ။
Koovs က၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အံ့သြဖွယ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမိတ်ဆက်နေဖြင့်စျေးကွက်ကျော်ယူကြပြီဖြစ်သောသူတို့အားမိုဘိုင်းစျေးဝယ် applications များ, တစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအဆက်စပ်ပစ္စည်း, အဝတ်များနှင့်ဖိနပ် purchasing အဘို့ဤလျှောက်လွှာကိုသုံးနိုင်သည်။
၎င်း၏အရွယ်အစားသာ 27 MB အထိဖြစ်သကဲ့သို့ဒီ app သုံးခြင်းနှင့် download လုပ်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ ဒီ app လည်းအများအပြားအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် App Store မှာပေါ် 4.1 ထဲက5ကြယ်တို့သည်ကြီးစွာသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။
Voonik ယောက်ျား, မိန်းမ, ကလေးတွေကအသုံးပြုနိုင်သည်အခြားစျေးဝယ် application ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာကိုရိုးရာနှင့် Semi-ရိုးရာအိန္ဒိယ wear အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာအချို့နှင့်အတူ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ပေးပါသည်။
ဤလျှောက်လွှာကိုတောင်မကောင်းတဲ့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်အောက်မှာဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်ရာ 14 ကို MB ၏အရွယ်အစားရှိပါတယ်။ အဆိုပါ application ကို 4.4 ထဲက5ကြယ်တစ်ဦးအထင်ကြီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီးသင်က handloom တစ်ပိုး saree ထံမှလိုအပ်သမျှအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးပါသည်။
ကို eBay သင်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်အသုံးပြုနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း application များထဲကတစ်ခုဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ သို့သော်ယခုတဖြည်းဖြည်း၎င်း၏အနေအထားကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်နောက်ဆုံးလျှောက်လွှာ Snapdeal ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာကိုအရမ်းအချို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအလွန်ရေပန်းစားခဲ့ပေမယ့်ယခုကပဲသူ့ရဲ့ထိတွေ့ဆုံးရှုံးနေပါတယ်။
ဒီ app ကိုသာ App Store မှာပေါ် 3.8 ထွက်5ကြယ်တစ် rating ရှိပြီးဒီကြောင့်မတည်မငြိမ်ဒီဇိုင်းဒါမှမဟုတ် customer support ကိုအဖွဲ့ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ဤလျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာရှိနိုင်ပါရွေးချယ်စရာမျိုးစုံဖြစ်ပါတယ်။
ဤအတူကျနော်တို့ 15 ၏ android များအတွက်အကောင်းဆုံး 2019 စျေးဝယ် app များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကောက်ချက်ချ။ ကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့သည်ငါတို့၏ Picks သို့မဟုတ်မနှင့်အတူသဘောတူခြင်းရှိမရှိသိပါစေ!
အကောင်းဆုံးက Android ...
10 အကောင်းဆုံးကုန်စုံ ...
နို့ထဲက - ...
Rakuten Ebates - ...
ဘယ်လို Cancel မှ ...
Pantrify - အခမဲ့ ...
အန်းဒရွိုက်စျေးဝယ် Apps ကပ အကောင်းဆုံးဟာ android စျေးဝယ် Appss အကောင်းဆုံးစျေးဝယ် Apps ကပက Android
Router Setup Page - Router ကိုညှိပါ။